घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » साक्षात्कार » अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड: अब बाधा बिना पर्यटन!
अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • व्यापार यात्रा • अतिथि सत्कार उद्योग • साक्षात्कार • समाचार • मान्छे • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा
ATB अध्यक्ष Ncube
पूर्वी अफ्रिकी समुदाय (EAC) का छ सदस्य राष्ट्रहरूले यस वर्षको अक्टोबरमा तान्जानियामा आफ्नो पहिलो क्षेत्रीय पर्यटन प्रदर्शनी (EARTE) आयोजना गरे। यो क्षेत्रीय पर्यटन कार्यक्रम अर्को वर्षदेखि साझेदार राज्यहरूले घुमाउरो आधारमा आयोजना गर्ने छ।
पर्यटन र वन्यजन्तु मन्त्रीहरूको EAC परिषदले यस वर्षको मध्यमा वार्षिक पूर्वी अफ्रिकी क्षेत्रीय पर्यटन प्रदर्शनी (EARTE) लाई अनुमोदन गर्यो।
तान्जानिया "समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को लागी लचीला पर्यटन को प्रचार" को विषय संग पहिलो EARTE होस्ट गर्न को लागी चुनेको थियो। एक्स्पो गत हप्ताको शुरुमा बन्द भयो।
यो अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड (ATB) यसका कार्यकारी अध्यक्ष श्री कुथबर्ट एनक्यूबले EAC ब्लक बाहिरका अन्य प्रतिनिधिहरूसँग प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
श्री एनक्यूबले अफ्रिकाको पर्यटन विकासमा एटीबीको भूमिकाको बारेमा कार्यकारी वार्ता सञ्चालन गर्नुभयो।
eTN: अफ्रिकाको पर्यटन तर्फ अफ्रिका पर्यटन बोर्डको प्राथमिक दृष्टिकोण के हो?
NCUBE: हाम्रो प्राथमिक दृष्टि भनेको अफ्रिका बन्ने सुनिश्चित गर्नु हो "एक पर्यटकीय गन्तव्य"विश्वमा छनौटको। हामी विभिन्न माध्यमबाट अफ्रिकाको पर्यटनको विकास, प्रवर्द्धन र मार्केटिङमा केन्द्रित छौं।
यसमा अफ्रिका "विश्वमा छनोटको एउटा गन्तव्य" बनोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नको लागि लबिङ, श्रोतहरूको परिचालन, र नीति निर्माणलाई प्रभाव पार्छ।
बोर्ड (ATB) ले अफ्रिकी सरकारहरूसँग मिलेर विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेको छ जुन हामीलाई लाग्छ कि अफ्रिकामा पर्यटन विकासलाई गति दिनेछ। यो, अन्तर-अफ्रिकी पर्यटन आकर्षित गर्न 54 अफ्रिकी राज्यहरू बीचको अवरोधहरू हटाउने सहित।
eTN: अफ्रिकी पर्यटन बोर्डले अफ्रिकी देशहरूलाई पर्यटनबाट थप लाभ लिन कसरी मद्दत गरिरहेको छ?
NCUBE: अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड अफ्रिकामा पर्यटन विकास र विकासको प्रवर्द्धन र सुविधा दिन सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय र अन्य सरोकारवालाहरूलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ।
हामी पर्यटन मार्फत AU एजेन्डा 2063 आकांक्षा र 2030 UN दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDG) प्राप्त गर्न संयुक्त राष्ट्र (UN) र अफ्रिकी संघ (AU) सँग मिलेर काम गरिरहेका छौं।
यसमा ब्रान्डिङ, मार्केटिङ र अफ्रिकालाई एकल पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विश्वव्यापी पर्यटन बजार क्षेत्रमा प्रवर्द्धन गर्ने समावेश छ।
हाम्रो महाद्वीपीय पर्यटन बोर्ड (ATB) अब अफ्रिकी सरकारहरू, व्यापार संगठनहरू, गैर-सरकारी संस्थाहरू, अफ्रिकी संघ, र संयुक्त राष्ट्र समूहहरू र क्षेत्रीय ब्लकहरू मार्फत अफ्रिकी नागरिकहरूको लागि एक देशबाट अर्को देशमा स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्न लबिङ गर्दैछ।
eTN: ATB ले कुन चाल र वर्गहरूलाई लक्षित गरिरहेको छ?
NCUBE: अफ्रिकीहरूका लागि अफ्रिका भित्र यात्रा गर्ने लक्ष्य हो, आफ्नै निवासको देशबाट सुरु गर्दै - मानिसहरूले आफ्नै देश भित्र घरेलु पर्यटक, त्यसपछि क्षेत्रीय राज्यहरू र पछि सम्पूर्ण अफ्रिकाको रूपमा यात्रा गर्ने। पूर्वी अफ्रिकी समुदाय (ईएसी) ले यस्तो क्षेत्रीय पर्यटन वर्गको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
हामी केन्यालीहरू तान्जानिया र अन्य EAC ब्लक सदस्यहरू, तान्जानियाहरू र बाँकीहरू जस्तै भ्रमण गरेको देख्न सक्छौं। बाँकी EAC ब्लकका मानिसहरूले पश्चिमी तान्जानिया, युगान्डा र रुवान्डामा चिम्पान्जी, गोरिल्लाहरू हेर्न सक्छन् जुन अन्य सदस्यहरूमा पाइँदैन।
थप रूपमा, ATB ले अफ्रिकामा क्षेत्रीय सीमाहरू पार गर्न एकल भिसा लागू गर्न सबै विदेशी पर्यटकहरूको सजिलो आवतजावतको लागि लबिङ गरिरहेको छ। यसले एकल भिसा प्रयोग गरेर सिमाना पार गर्न सजिलो आवागमन मार्फत अफ्रिकामा धेरै दिन बिताउन थप विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ।
eTN: दक्षिण अफ्रिका र अरब उत्तर अफ्रिका बाहिर, बोर्डले सब-सहारा अफ्रिकालाई पर्यटनबाट थप लाभ लिन मद्दत गर्न के गरिरहेको छ?
NCUBE: हामीले आन्तरिक र क्षेत्रीय पर्यटनलाई लक्षित गर्दै पर्यटन प्रदर्शनीहरू आयोजना गर्न धेरै अफ्रिकी देशहरूसँग साझेदारी गरेका छौं। हामीले गत वर्ष (2020) तान्जानियामा यस्तो प्रदर्शनी गरेका थियौं - UWANDAE एक्सपो।
सिएरा लियोन, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, घाना, इथियोपिया र इजिप्टका एटीबी प्रतिनिधिहरूको टोलीले अरुशामा भएको EARTE सँग भाग लिएका छन्। COVID-19 महामारीमा यात्रा प्रतिबन्धहरूले हाम्रो कामलाई असर गरेको छ, तर हामी अझै अगाडि बढ्छौं।
अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड हाल अफ्रिकामा पर्यटन विकास प्रवर्द्धन गर्न महाद्वीपीय लगानी अभियानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन लगानी सम्मेलन (ITIC) सँग काम गरिरहेको छ।
ITIC मार्फत, बुल्गेरियाका लगानीकर्ताहरूले अन्य लगानीकर्ताहरूसँग साझेदारीमा, उत्तरी तान्जानियामा, ताराङ्गिरे, लेक मन्यारा, सेरेनगेटी र न्गोरोन्गोरो वन्यजन्तु पार्कहरू भित्र 72 होटल परियोजनाहरूमा $4मिलियन स्थापना गर्न लागेका छन्।
तान्जानिया ITIC लगानीको पहिलो लाभार्थी हो जुन अर्को वर्ष 2022 जनवरीबाट लिनेछ।
बोर्डले एस्वाटिनीको राज्यको सरकारसँग पनि काम गरिरहेको छ र हाम्रो अफ्रिकी संस्कृतिहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति तय गरेको छ। सांस्कृतिक प्रदर्शन र सम्पदाहरू आन्तरिक र सांस्कृतिक पर्यटनको हिस्सा हुन् जसले आन्तरिक पर्यटन विकासको लागि स्थानीय नागरिकहरूको भीडलाई तान्ने गर्दछ।
eTN: यो बोर्डले यसलाई सुधार गर्न कसरी मद्दत गरिरहेको छ?
NCUBE: अफ्रिकी पर्यटन बोर्डले साना गन्तव्यहरू र सरोकारवालाहरूलाई अफ्रिकाको सम्भावित पर्यटक बजारहरूमा व्यापार, मिडिया र यात्रुहरूसम्म पुग्नको लागि प्रत्यक्ष लागत-प्रभावी र प्रभावकारी तरिका पनि दिइरहेको छ। यसको उद्देश्य स्थानीय पर्यटन क्षमता, र युरोपेली र अमेरिकी पर्यटकहरूको निर्भरता कम गर्न आन्तरिक र अन्तर-अफ्रिकी पर्यटन आधार प्राप्त गर्नु हो।
कोभिड-१९ को महामारीले अफ्रिकालाई पर्यटनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको थियो। युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, एसिया र अन्य सम्भावित पर्यटक बजारहरूमा लगाइएको लकडाउन र यात्रा प्रतिबन्धले अफ्रिकी पर्यटनलाई ठूलो असर पारेको थियो।
अफ्रिकाले प्रत्येक वर्ष रेकर्ड गरिएका एक अरब भन्दा बढी विश्वव्यापी पर्यटकहरूमध्ये लगभग 62 मिलियन पर्यटकहरू प्राप्त गर्दछ। युरोपले लगभग 600 मिलियन विश्वव्यापी पर्यटकहरू प्राप्त गर्दछ।
हाम्रो पर्यटन बोर्डले अब क्षेत्रीय पर्यटन ब्लकहरूको लागि जोड दिइरहेको छ। EAC लाई समावेशी र राम्ररी समन्वयित दृष्टिकोणमा हात मिलाउने ब्लकको रूपमा हेर्न अफ्रिकी एजेन्डाको वस्तुनिष्ठतातर्फ सही कदम हो।
ATB ले नोभेम्बरको मध्यमा कतार ट्राभल मार्ट (QTM) मा एक प्रदर्शनी आयोजना गर्ने भएको छ । हामीले अफ्रिकाका पर्यटन मन्त्रीहरूलाई सहभागी हुन आमन्त्रित गरेका छौं, जसले अफ्रिका भ्रमण गर्न थप पर्यटकहरू आकर्षित गर्ने र अन्तर-अफ्रिकी पर्यटनको विकासलाई पनि आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।
eTN: अफ्रिकी पर्यटन बोर्डले पहिलो पूर्वी अफ्रिकी क्षेत्रीय पर्यटन प्रदर्शनी (EARTE) लाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ?
NCUBE: ईएसी क्षेत्रको पर्यटन नराम्ररी प्रभावित भएको थियो। EAC सचिवालयले गत वर्ष (67.7) लगभग 2020 मिलियन अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूमा क्षेत्रीय पर्यटन लगभग 2.25 प्रतिशतले घटेको सङ्केत गरेको थियो, जसले पर्यटक राजस्वबाट US$ 4.8 बिलियन गुमाएको थियो।
ईएसी क्षेत्रले कोभिड-१९ महामारीको प्रकोपले यस प्रवृत्तिलाई नराम्ररी प्रभावित गर्नुअघि २०२५ मा १ करोड ४० लाख पर्यटक भित्र्याउने प्रक्षेपण गरेको थियो।
EAC क्षेत्रसँग अफ्रिकाको पर्यटन राजस्वको 8.6 प्रतिशत मात्र र विश्व पर्यटनको 0.3 प्रतिशत हिस्सा छ।
केन्या र तान्जानिया आगामी क्षेत्रीय ब्लकको राम्रो उदाहरण हो जहाँ पर्यटकहरूले साझा पर्यटक स्रोतहरूको आनन्द लिनको लागि क्षेत्रीय सीमाहरू पार गर्न सक्छन्।
अफ्रिकी पर्यटन बोर्डले हाल अफ्रिकी सरकारहरू र स्थानीय समुदाय र पर्यटन खेलाडीहरू बीचको सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न दाता एजेन्सीहरूको श्रृंखलासँग मिलेर काम गरिरहेको छ।
समुदायबिना पर्यटन हुँदैन । समुदायहरू पर्यटनका दूत हुन्। अफ्रिकाको पर्यटनमा हाम्रो पर्यटन मूलतः स्थानीय समुदायहरूमा आधारित छ।
eTN: ATB को दृष्टिकोणबाट, पहिलो EARTE मा भाग लिनुको अर्थ के हो?
NCUBE: यो अफ्रिकी एजेन्डाको वस्तुनिष्ठता तर्फ सही कदम हो EAC लाई ब्लकको रूपमा एक ब्लकको रूपमा हात मिलाउने व्यक्तिगत विभाजनको विपरीत जसले हामीलाई महाद्वीपको रूपमा कतै लैजाँदैन।
हेर्नुहोस्, हामीले तान्जानियाका राष्ट्रपति, सामिया सुलुहु हसन, जो एक च्याम्पियन र पर्यटन मार्फत अफ्रिकाको विकास रणनीतिको अग्रगामी हुन्, द्वारा ड्राइभलाई नोट गरेका छौं। एटीबीले राष्ट्रपति सामियालाई कन्टिनेन्टल टुरिजम अवार्ड २०२१ बाट सम्मानित गरेको छ। कोभिड-१९ महामारीको बीचमा यस क्षेत्रले लचिलो ढंगले पुनरागमन गरेकोमा उनी दृढताका साथ उभिइन्।
जान्जिबारका अध्यक्ष, डा. हुसेन म्विनयीले तान्जानियामा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रहरू बीच घुमाउरो हुनको लागि वार्षिक क्षेत्रीय EARTE सुरु गर्नुभयो। यो क्षेत्रीय एक्सपोले अफ्रिकालाई एक महाद्वीपीय आउटपुटको फोकसको साथ रोजाइको एकल गन्तव्यको रूपमा ब्रान्डिङ गर्नेछ। हामीले अवरोधहरू तोड्न आवश्यक छ।
eTN: के ATB ले पर्यटन क्षेत्रलाई आफ्नो खुट्टामा फर्काउनको लागि कुनै रिकभरी उपायहरू रोल आउट गरेको छ?
NCUBE: अफ्रिकी पर्यटन बोर्डले पूर्वी अफ्रिका र अफ्रिकामा पर्यटन पुन: प्राप्तिको लागि अफ्रिकी देशहरूसँग सहकार्य गर्दैछ। हामी हाम्रो क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मार्केटिङ नेटवर्क र मिडिया लागू गर्दै अधिक आगन्तुकहरूलाई अफ्रिका भ्रमण गर्न बुक गर्न प्रोत्साहित गर्न।
ATB ले मार्केटिङ, जनसम्पर्क, लगानी, ब्रान्डिङ, प्रवर्द्धन, र आला पर्यटन बजारहरू स्थापना गर्ने अवसरहरूमा विस्तार गरिरहेको छ।
निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका सदस्यहरूसँग साझेदारीमा, अफ्रिकी पर्यटन बोर्डले अफ्रिकामा यात्रा र पर्यटनको दिगो विकास, मूल्य र गुणस्तर बढाउँछ।